राजेन्द्र प्रसाद तिवारी को हुन त ? – MeroJilla.com
राजेन्द्र प्रसाद तिवारी को हुन त ?
पर्वतको पयुँ गाँउपालीका वढा नम्वर ६ मा पिता दुर्गा प्रसाद तिवारीका कान्छा पुत्रको रुपमा जन्मेका युवा हुन राजेन्द्र प्रसाद तिवारी । तिवारी अहिले उमेरले ४२ बर्षको पुगेका छन । शैक्षिक रुपमा सामाजिक अंग्रेजीको मास्टर्स समेत उनले सकेका छन ।उनी तीन दाजुभाई मध्यका कान्छा भाई हुन ।
सामजीक काममा सानौ उमेर देखी रुचि राखने राजेन्द्रले विगत २०७२ बैशाख १२ गते गएको बिनासकारी भुकम्प पछि देशै भरीका भुकम्प पिडीत नागरीकलाई राहत र उदारमा खटिएका ब्यत्ति हुन । उनले सो दुखको समयमा पर्वतका नागरीकलाई पनि आर्थिक रुपमा थुप्रै साहेतम गरेको सर्वधित नै छ ।उनले नेवी संघ देखी काँग्रेसको राजनीतीमा लागेका ब्यत्ति हुन । उनको काँग्रेस प्रतिको लगाव र योग्दानका कारण नेपाली काँग्रेसले उनलाई माहधिवेशन प्रतिनीधीको रुपमा जिम्मा समेत दिएको छ । राजेन्द्र प्रसाद तिवारी लिखु खोला हाईर्डो पावर कमपनीका प्रमुख हुन भने लोहोरे खोला जल बिधुत कम्पनीका सहप्रमुख समेत हुन ।
नेपाली जल स्रोतको सदुपयोग गरेर हाल २५० जना युवालाई रोजगारी सर्जिना गरेका छन । कालिगण्डकी जल बिधुत आयोजनाको सदुपयोग गरेर पर्वतका वेरोजगार युवालाई समेत रोजगार दिलाउने उनको मुख्य योजना रहेको छ । उनी पैसाको पछाडी दौडने ब्यक्ति समेत होईन्न र राजेन्द्र प्रसाद तिवार समाजीक सेवा,दुखीको सारथी बन्न चाहाने असल खुवी वोकेका पुरुष हुन । हाल उनलाई नेपाली काँग्रेसले पर्वत प्रदेश नम्वर २ को उम्मेद्वार दिनुनै उनको एउटा असल परिचय र योगदान हो ।
सानैमा साथीभाई संग कसरी सहयोग गरौ भन्न मनोभमवना बोक्ने मध्यका सरल शालीन ब्यत्ति हुन राजेन्द्र ।
उनका जेठा दाजु भिम प्रसाद तिवारी पर्वत जिल्लाका पुर्व साहयक प्रमुख जिलला अधिकारी हुन । उनका माहिला दाजु हेमन्त तिवारी नेपाली काँग्रेस पर्वतका पुर्व माहसमीती सदस्य एवम धुलीखेल बहुमुखी क्यामपसका प्रमुख हुन । एक राजनीतीक परिवारमा जन्मेका राजेन्द्र प्रसाद तिवारीको लागी रुख चिन्नहमा मतदान गर्न सो क्षेत्रका नागरी पनि आतुर रहेका छन ।